करिनाको महंगो जिवनशैली, फोन मात्रै १ करोड ३५ लाखको बोक्छिन् करिना, हेर्नुहोस् – Dainik Samchar
करिनाको महंगो जिवनशैली, फोन मात्रै १ करोड ३५ लाखको बोक्छिन् करिना, हेर्नुहोस्
August 10, 2021 542
बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर खान एक फेशनएबल नायिका मध्ये एक हुन् । करीनालाई बी टाउनको सबैभन्दा राम्राी तथा ग्ल्यामर्स अभिनेत्री मध्ये एक मानिन्छ । करीनाले जे लगाउँछिन त्यो फेशन संसार भर चल्न सुरु गरिहाल्छ । आफु गर्भवती भएको बेला समेत करीनाले आफ्नो फेशनलाई लिएर जुन सेट गरिन् त्यो पनि खुबै चलेको थियो ।
करीना रोयल खान्धानकी छोरी मात्र हैन उनी एक रोयल परिवारकी बुहारी समेत हुन् । यही कारण उनको शोक पनि एकदमै राजकीय खालका रहेका छन् । यसैबीच करीनाको केही तस्बीरहरु बाहिर आएका छन् । जुन फोटोमा उनले आफ्नो एकदमै महंगो फोन देखाईरहेको देख्न सकिन्छ ।
तपाईहरु लाई बताउँ कि करीनाको हातमा जुन फोन देखिएको छ त्यो आई फोनको सीरीजको आईफोन १२ प्रो मोबाईल फोन हो । करीनाको यस फोनको मुल्य करीब १ करोड २९ लाख देखी १ करोड ३५ लाख सम्म रहेको छ । यस मोडलको मुल्य अलग–अलग रहेको छ । उनी यस फोटोमा एकदमै सामान्य ट्रयाक सुटमा देखिएकी छिन् ।
बिना मेकअप पनि करीना एकदमै सुन्दर देखिएकी छिन् । उनको कामको कुरा गर्ने हो भने व्यवसायिक जिवनमा उनले रामायण फिल्मका लागि सिताको भुमीकाका कारण उनको चर्चा एकदमै चुलिएको थियो । उनले सिताको भुमीकाको लाथि १२ करोड रुपैया मागेकी थिईन् ।
Prevतनहुँका यि नौ महिने वालकलाई लाग्यो विश्वकै दुर्लभ रोग
Nextगहना किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कति छ सुनको मूल्य
टिक’टकमा यस्तो भि’डियो अपलोड गर्नाले यी युवतीलाई ३ व’र्ष जेल र २२ लाख जरिवाना ! (भिडियो सहित)
विष्णु माझिको चरि जेलैमा यस्तो रुहाउने टिकटकहरु (हेर्नुस् भिडियो )
मदनकृष्णलाई भेटेपछि वियोन्सले भनिन्–‘ठूलो सपना पुरा भयो’ (भिडियो)
लाहुरे राहुल र लाहुरेनी स्मिताको बारे बन्यो पहिलो गीत (भिडियो हेर्नुहोस)
सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! (16395)
काठमाडाैंको काभ्रेस्थलीबाट अचम्मकी महिला पक्राउ (5605)
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (5208)
संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र हुने यस्तो चिन्ह, तपाईकोमा पनि छ की ? (4486)
स्वस्तिमा खड्का अभिनित साउथ इन्डियन फिल्म ‘थिरिमाली’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडिओ (4473)